ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်း အေးရွာသုသာန်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေစဉ် ဒေသခံများလမ်းပိတ်ဆို့ကန်? - Yangon Media Group
ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်း အေးရွာသုသာန်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေစဉ် ဒေသခံများလမ်းပိတ်ဆို့ကန်?
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၁-ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်း ဝါးရုံဆိပ် ကျေးရွာအနောက်ရပ်ကွက်ရှိ သုသာန်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်မှုကို ဒေသခံများက ပိတ်ဆို့ကန့်ကွက် ခြင်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့မှုကိုခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်လို့ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ ဆက် လုပ်၊ မလုပ်ကတော့ အထက်လူ ကြီးတွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှ သိ ရပါမယ်”ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမောင်မောင် အောင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်ညနေပိုင်းက ပြော သည်။
သုသာန်ပြောင်းရွှေ့ရန် သက် ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီး ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် ဆောင် ရွက်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း နာ ရေးရှိသဖြင့် ညနေပိုင်းသို့အချိန် ပြောင်းလဲရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်း နှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်မှုကို ဒေသခံ ၁ဝဝ ကျော်က လမ်းပိတ် ဆို့တားဆီးခဲ့သဖြင့် သုသာန်ပြောင်း ရွှေ့မည့်အစီအစဉ်ခေတ္တရပ်ဆိုင်း လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှူးနဲ့ ကျွန် တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကိုဇော်လင်း ရေ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်မလုပ် တော့ဘူး၊ နောက်မှ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် မယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်”ဟု ဝါးရုံ ဆိပ်ကျေးရွာ အနောက်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်လင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
သုသာန်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီ စဉ်တိုင်း လူသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိကာ ယခုပြောင်းရွှေ့ရန်စီ စဉ်ခြင်းသည် လေးကြိမ်မြောက် ဖြစ်ကြောင်း၊ နေရာပြန်လည်ပေး မည့်သုသာန်သည် နေရာကျဉ်း မြောင်းပြီး လူနေအိမ်ခြေများနှင့် နီးကပ်သဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်စက်မှထွက် ရှိသည့်မီးခိုးများက လူများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယင်း အပြင် သုသာန်ဖျက်သိမ်းပြီးပါက လက်ရှိအသုံးပြုနေသော လမ်းကို ပါပိတ်မည်ဖြစ်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ သုသာန်မပြောင်းရွှေ့ရန်တား မြစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ က ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ညွန့်က ”အန်တီ တို့ကမွေးကတည်းက ဒီမှာပဲမွေး လာတာ (၅၇)နှစ်ရှိပြီ။ သူတို့သွား ပြီးလုပ်တဲ့ သင်္ချိုင်းက ရပ်ကွက်ခံ နေတယ်။ မီးသင်္ဂြိုဟ်ရင် ရပ်ကွက် ကိုမွှန်မယ်၊ မီးနေသည်ရှိမယ်၊ ကျန်း မာရေးအခက်အခဲတွေရှိမယ်။ ဒီ မှာက ဘာမှကျန်းမာရေးထိခိုက် စရာမရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။
သုသာန်ပြောင်းရွှေ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရပ်ကွက်ပြည်သူများ ၏သဘောထားကို ခုနစ်ကြိမ်တိုင် အစည်းအဝေးခေါ်ယူညှိနှိုင်းခဲ့ ကြောင်း၊ ယခင်သင်္ချိုင်းဟောင်းမှာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ရေတိုက်စားကာ မြေပြိုခြင်းကြောင့် မြေနေရာနည်း ပါးလာသဖြင့် မြေပိုင်ရှင် ဦးဘခက် ထံမှ ဆရာတော်များနှင့် နာရေး ကူညီမှုအဖွဲ့များက မြေနေရာ အလျားပေ ၄ဝဝ၊ အနံပေ ၂ဝ ကို အလှူခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမြေအလှူခံမှုကို ဦးဘခက်မှ ယာယီအနေဖြင့်လှူ ဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ လှူဒါန်းရာတွင် လည်း လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင် ပါက ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကတိ ကဝတ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ မြေယာယီလှူဒါန်း ခဲ့သူက စာချူပ်ပါအတိုင်း မြေကို ပြန်လည်တောင်းခံလာသဖြင့် ဆရာ တော်များနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် မြေ ပိုင်ရှင်များညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်း ရာတွင်လည်း မြေပိုင်ရှင်က ယင်း မြေကိုပြန်လည်ရရှိပါက သုသာန် မြေနေရာသစ်တစ်ခုကို ယာယီပြန် လည်လှူဒါန်းရန် သဘောတူသဖြင့် အစည်းအဝေးများ အကြိမ်ကြိမ်ပြု လုပ်ကာ သုသာန်မြေရွှေ့ပြောင်း ရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝါးရုံ ဆိပ်ကျေးရွာအနောက်ရပ်ကွက် အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်လင်းက ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”အခု အငြင်းပွားနေတဲ့ သုသာန်နှစ်ခုစလုံးက ယာယီ တွေပါ။ ဆိပ်ကြီးသုသာန်ကို အခု ပြင်နေတယ်။ အဲဒါပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့က အဲဒီမှာပဲ သင်္ဂြိုဟ် ခွင့်ရှိတော့ပါတယ်”ဟု ¤င်းက ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ ဆက်လက်ပြော သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပို?